चुल्होदेखि चुचुरोसम्म पूर्णिमा | Seto Khabar
काठमाडौं । “अहिले सम्झँदा अचम्म लाग्छ, एउटा गाउँको मध्यम वर्गीय किसान परिवारकी छोरी मैले हिमाल चढ्ने सपना कहिल्यै देखेकी थिइनँ तर आज पाँच–पाँचवटा हिमालको चुचुरोमा पुग्न सफल भएँ । हिमाल आरोहणको यात्रा आफैँका लागिसमेत एक किसिमले ‘सरप्राइज’ भयो ।”
एकपछि अर्को सफलता हासिल गर्दै हिमाल आरोहीका रुपमा आफ्नो परिचय स्थापित गर्न सफल फोटो पत्रकार पूर्णिमा श्रेष्ठको अनुभव हो यो । श्रेष्ठले यही असोज १५ (अक्टुबर १) मा धौलागिरि हिमाल आरोहण गर्न सफल भएकी हुन् । उनीसँगै अर्का आरोही महिला पासाङल्हामु शेर्पाले पनि धौलागिरि हिमाल आरोहण गरी प्रथम महिला आरोहीको सूचीमा आफूलाई पार्न सफल भइन् । उनीहरु दुवै जनाले आफ्नो नाम राख्न सफल भएका हुन् ।
धेरैले उनीलाई हिमाल आरोहणमा सोचे जसरी प्रेरित भने गरेनन् । किन चढ्ने हिमाल ? हिमाल चढेर के हुन्छ ? भन्नेको सङ्ख्या निकै धेरै थियो तर त्यसको उत्तर उनीसँग थिएन । फेरि त्यसबीचमा निकै कमले मात्र भित्री इच्छालाई बुझेर त्यो आँटलाई पूरा गर्नुपर्छ भनेर हौसला दिन्थे । पूर्णिमाले आफ्नो चाहना पूरा गर्ने प्रयास जारी राखिन् । उनीलाई ननिदाई देख्ने सपनाको नसा लागिसकेको थियो । त्यसैले त्यो सपना पूरा गर्न उनी कैयौँ रात जागै बसिन् ।
दिनदिनै जागेको यही भोक मेटाउन एक दिन हिमाल आरोहण कम्पनिको मानिसलाई आफ्नो सगरमाथा चढ्ने इच्छा सुनाइन् । सगरमाथा चढ्नुअघि ६ हजार मिटर चुचुरो चढ्नुपर्ने सुझाव पाएपछि उनी त्यसको तयारीतिर लागिन् । “मलाई यसरी तालिम विना नै सहजै हिमाल चढ्छु, भन्ने आँट कसरी आयो होला ?” यो आफ्नै प्रश्नको जवाफ उनले अहिलेसम्म पनि पाएकी छैनन् । उनी अहिले पनि अनुत्तरित प्रश्नमै रोकिनुहुन्छ । आर्थिक पाटोको समस्या पनि उस्तै थियो । यसबीचमा आफू अध्ययरत स्कुलका भाइबहिनीले खाजा रकम जोगाएर दिएको सहयोग रकमदेखि साथीहरुले आफ्नो रहर पैसाले रोक्नु हुँदैन भन्दै दिएको ऋणसम्म गरेर रु चार लाख, विभिन्न शुभचिन्तकबाट प्राप्त साथ सहयोग र शुभेच्छाले मानसिक रुपमा त उनीले चुचुरो चढिसकेकी थिइन्। सशरीर मात्र त्यहाँ पुग्न बाँकी थियो । अन्ततः आमा बुबादेखि सम्पूर्णको आशीर्वाद लिएर सन् २०१७ सेप्टेम्बर पहिलो हप्ता मनास्लु हिमाल आरोहण दलमा सहभागी भएर चुचुरोतिर उनका पाइला लम्के ।
विभिन्न कठिनाइ हण्डर र ठक्कर सबैको अनुभव बटुल्दै २२ दिनमा उनी असोज १२ गते (सेप्टेम्बर २६) सन् २०१७ मा पहिलोपल्ट आठ हजार एक सय ६३ मिटरको मनास्लु हिमालको चुचुरोमा पुग्न सफल हुनुभयो । जीवनको पहिलो हिमाल आरोहणको अनुभव उनले मनास्लु हिमालबाट लिइन् । त्यसपछि उनको आत्मविश्वास हिमालजस्तै अग्लिँदै गयो । सन् २०१८ मे १९ मा उनीले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरिन् । त्यसैगरी सन् २०२१ अप्रिलमा अन्नपूर्ण प्रथम र २०१९ नोभेम्बर १० आमादब्लम हिमालको सफल आरोहणको अनुभव बटुलिन् । धौलागिरि हिमाल उनी दोस्रो प्रयासमा सफल भइन् । “हिमाल आरोहण मृत्यु बोकेर हिँडेको यात्रा हो, कति बेला कहाँ के हुन्छ थाहा छैन तर त्यही जोखिम र चुनौतीबीच प्राप्त खुसी र आनन्द सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो,” श्रेष्ठले भनिन् । “हिमाल चढेको खुसी सम्झिरहँदा यसको ऋण सकेसम्म नसम्झनु परे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ,” उनले साथीभाइसँग ऋण लिएर हिमाल चढेको र कम्पनी र गाइडलाई बुझाउने पैसाको अभाव भएको प्रसङ्ग पनि जोड्न छुटाइनन् ।